မလေးရှားနိုင်ငံ၏ အတန်အသင့်လူစည်ကားသောရပ်ကွက်တစ်ခုအတွင်းရှိ အနည်းငယ်ချောင်ကျသော နေရာတနေရာ၌ လူတစ်ယောက်သည် ဟောင်းနွမ်းဆွေးမြည့်နေပြီဖြစ်သည့်အဆောက်အဦဟောင်းတစ်ခု၏ နံရံအားမှီလျှက် ဂျစ်ပစီစတိုင်လ်ဖြင့်ရပ်နေလေသည်။
အမှတ်တမဲ့ကြည့်လျှင် ထိုလူ၏အရောင်အဆင်းမရှိသည့်ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကြောင့် ခပ်ညံ့ညံ့တောဇာတ်တစ်ခုမှလူကြမ်းသရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဟုထင်မှတ်ရမည်ဖြစ်သော်လည်း ထိုလူသည် လူကြမ်းသရုပ်ဆောင်မဟုတ်ချေ၊ ထိုလူသည် “သားကြီး”သာဖြစ်ချေသည်။
“….သြော်..?? rapperတွေသီချင်းထဲ ထည့်ထည့်ဆိုနေတဲ့ ဘဝ..ဘဝ..
ငါ့ကျမှ မဝ..မဝ ဖြစ်ရတယ်…”
အထက်ပါအတိုင်းရေရွတ်ပြီးသားကြီးသည် ခြစ်ခြစ်တောက်ပူနေသည့်မိုးကောင်းကင်အား ဆွေးဆွေးမြည့်မြည့်မော့ကြည့်မိလေသည်။
“အင်း..?? နတ်ဖြစ်တာချင်းအတူတူ မလေးရှားမှာနတ်ဖြစ်ရရင်တော့မလွယ်...
မလေးရှားနိုင်ငံဟာ တော်တော်ပူတဲ့နိုင်ငံပဲ..? နေနဲ့နည်းနည်းလှမ်းတဲ့မြေကြီးပေါ်က ငါတို့လူတွေတောင်ဒီလောက်ပူနေရင်
နေနဲ့နီးတဲ့ ကောင်းကင်ကနတ်တွေဆို သွားပြီ၊ အဝတ်တောင်ကပ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး...
အင်း..? မလေးနတ်သမီးတွေတော့ ဒုက္ခပါပဲ..”
ထိုသို့အဆီအငေါမတည့်သည့်စကားများအားပြောဆိုပြီးသကာလ သားကြီးသည်ကောင်းကင်မှအကြည့်ကိုဖယ်ခွါ၍ လူအများဥဒဟိုသွားလာနေသည့်လမ်းမဘက်သို့အကြည့်ကိုရွေ့လိုက်လေသည်။ သို့သော်….
အကြည့်ကိုနေရာတနေရာတည်းတွင်ကြာကြာမထားရဲ.. ခဏခဏရွေ့ရပြန်၏ ၊
အကြောင်းမူကား.... လမ်းသွားလမ်းလာ လူ“အထီး”များအားဖယ်၍ လူ “အမ”များဆီသို့သာအကြည့်ကအော်တိုမက်တစ်ရောက်ရောက်နေသဖြင့် ကံမကောင်းလျှင်နှာဘူးဟု အထင်ခံရနိုင်လေသည်။
တအောင့်မျှကြာသော်...... မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းမဟာသီထက်ပင်အသက်ပိုကြီးနေသေးသည့် သားကြီး၏ ဖုန်းအစုတ်ထဲသို့ callတစ်ခုဝင်လာလေသည်...
“အေးကွာ… မနေ့ကပဲငါ့ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီ သူဋ္ဌေးနဲ့ထထိုးကြလို့ကွာ”
“ဟေ!! ဖြစ်မှဖြစ်ရလေကွာ.. မင်းခေါင်းမှကောင်းသေးရဲ့လား ? သူဋ္ဌေးကိုပဲပြန်ထိုးရတယ်လို့”
“အော်….သူငယ်ချင်းရယ် ဒါများအဆန်းလုပ်လို့ ရွေပြည်မြန်မာကလူမဟုတ်တာကျနေတာပဲ သူဋ္ဌေးတွေလူပါးဝတာလောက်တော့ ဒို့ဆီက အသက်ကြီးကြီးဘဲတွေလူပါးဝတာကိုဘယ်မှီပါ့မလဲ? ပါးပါးလေးပါကွ ဒါနဲ့ ဘာဆက်လုပ်မယ်စိတ်ကူးထားလဲ”
“ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းကိုမသိတော့ဘူး နေစရာလည်းမရှိဘူး စားစရာလည်းမရှိဘူး မင်းမှာအလုပ်လေးဘာလေးရှိရင်ပြောပါဦး”
ထိုအခါ တဖက်ဖုန်းမှအတန်ကြာတိတ်သွားသည် နောက်မှတွေးတွေးဆဆလေသံလေးဖြင့်..
“အင်း…မင်းက လူပုံကပျော့တိပျော့ဖတ်နဲ့ဆိုတော့အလုပ်ကြမ်းတွေလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး KLမြို့ထဲမှာလုပ်မလား?ငါ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ် ဘာမှမပင်ပန်းဘူး စန်းပွင့်ရင်ပွင့်သလိုပိုက်ဆံရမယ် ကံကောင်းရင် မလေးရဲမှုးချုပ်ထက်တောင်မင်းဝင်ငွေတွေများနေဦးမယ်”
“တယ်ဟုတ်ပါလားသူငယ်ချင်းရ ဘာအလုပ်တဲ့လဲ? ဘာလုပ်ရမှာလဲ”
“ဘာမှကိုမလုပ်ရဘူးဟေ့.. မင်းသားလိုကျော့နေအောင်ဝတ်စားပြီးထိုင်နေရုံပဲ...အဲဒီမှာ အန်တီကြီးတွေ မမကြီးတွေကားလှလှလေးတွေနဲ့လာခေါ်ရင်လိုက်သွား သူတို့အကြိုက်လုပ်ပေးလိုက်.. ဒါပဲ ၊ငါထင်ပါတယ် နှစ်လလောက်မင်းကောင်းကောင်းအနစ်နာခံပြီးလုပ်လိုက်ရင် မင်းဘဝလုံးဝပြောင်ပြောင်ရောင်ရောင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်...”
……အကောင်းမှတ်လို့နားထောင်နေတာ ဒင်းက ဟိုဟာလုပ်ခိုင်းနေတာကိုး...?
ဝင်းဇော်၏ဆိုလိုရင်းကိုသဘောပေါက်ပြီးသကာလ သားကြီးလည်းပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ်ကော်ဆဲပြီး ဖုန်းချလိုက်တော့သည်။
…သြော် ဘဝ..ဘဝ၊ လဒ…လဒလို့ပဲအော်ရတော့မည်။
ထို့နောက်“အလွန်း”ဆိုသူတရုတ်လူမျိုးသူငယ်ချင်းအားသတိရသဖြင့်လက်ကျန်ငွေဖြင့်ဖုန်းခေါ်လိုက်သည် အခြေအနေကိုပြောပြလိုက်သည် အလွန်းလည်းလိုလိုလားလားပင်ကူညီခဲ့သည်
“သူဋ္ဌေးပေးတဲ့အိမ်မှာပဲငါတို့နေနေကြတာ မင်းလည်းလာနေပေါ့ ဘာမှမဖြစ်ဘူး စားစရာလည်းမပူနဲ့ ငါကြံမယ်”
အခန်းကြီးသုံးခန်း ဧည့်ခန်းကြီးတခန်းနှင့် နေချင့်စဖွယ်လေးဖြစ်ပြီး လောလောဆယ် နေထိုင်သူကား သားကြီး၊ အလွန်းနှင့် အမြဲရေခဲရှုနေသည့်နောက်တရုတ်တစ်ကောင် ပေါင်းသုံးယောက်သာ သို့သော်နောက်တစ်ရက်လင်းလျှင် သူတို့နှင့်အလုပ်အတူတူလုပ်မည့်နောက်တရုတ်မနှစ်ယောက်ဤအိမ်သို့လာရောက်နေထိုင်မည်ဖြစ်သဖြင့် သားကြီးနှင့်အလွန်းက တစ်ခန်းယူပြီး မရောက်လာသေးသည့်တရုတ်မနှစ်ယောက်အတွက် အခန်းလွတ်တစ်ခန်းချန်ထားရသည်။
နောက်တစ်ရက်ကူးသော် အလွန်းအလုပ်ထွက်လုပ်ချိန်တွင်သားကြီးလည်းအလုပ်ထွက်ရှာလေသည် ။
ညအမှောင်သာကြီးစိုးသွားခဲ့သည် ဘာအလုပ်မှရမလာခဲ့ စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြင့်နေထိုင်ရာအခန်းသို့ပြန်လာခဲ့ရသည်။
လူခေါ်ဘဲလ်အားနှိပ်ပြီး တအောင့်ကြာသော် အထဲမှသစ်သားတံခါးပွင့်လာပြီး တရုတ်မနှစ်ယောက်၏မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းလေးပေါ်လာသည်။
အဲ… အသံလေးတွေက စွာတာတာလေး… သားကြီးရယ်ချင်သွားသည်၊
“ဘယ်သူနဲ့မှမတွေ့ချင်ဘူး ခုလောလောဆယ်ငါ့ခေါင်းအုံးနဲ့ပဲငါတွေ့ချင်တယ် အိပ်ငိုက်နေပြီ”
“သြော်… အလွန်းပြောတဲ့လူကနင်လား ဒါဆိုလည်းဝင်ခဲ့”
“ငါက“အိုက်ယင်” သူက“အလင်း”တဲ့ အီပို့ကနေတက်လာတာ နင်ကရော”
“ငါ့နာမည် steven chow ဟောလိဝုကနေပြန်လာတာ”
ထိုအချိန်က shaoling soccerဇာတ်ကားဖြင့်နာမည်ကြီးနေသောဟောင်ကောင်မင်းသားကြီးတစ်ဦး၏နာမည်အားတမင်ရွဲ့ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
တရုတ်မနှစ်ယောက်လုံးပြုံးစေ့စေ့ဖြစ်သွားသည်။ ထို့နောက် ခပ်စွာစွာ အိုက်ယင်က..
“နင်ကsteven chowနဲ့မတူဘူး man tat ng နဲ့ပိုတူတယ်” ဟုပြောပြီးနှစ်ယောက်သားသဘောခွေ့ကာရယ်မောနေကြလေသည်။
သားကြီးနည်းနည်းတော့ တင်းချင်ချင်ဖြစ်သွားသည် man tat ngဆိုသူမှာ steven chowဇာတ်လမ်းတော်တော်များများတွင် ဦးလေးလုပ်လိုက် အဖေလုပ်လိုက် လုပ်နေသူ အသက်ခပ်ကြီးကြီး နှုတ်ခမ်းမွှေးကားကားနှင့် ဘဲကြီးဖြစ်သည် ကိုယ့်စကားနှင့်ကိုယ်ပြန်ငြိနေပြီ ။ အလုပ်ရှာမရသဖြင့်လူကသိပ်မပျော် အရေးထဲသာလိကာလိုဟာလေးတွေနှင့်လာတိုးနေသည်
“နင်တရုတ်စကားပြောတာမပီဘူးနော် ရယ်ချင်စရာကြီးဖြစ်နေတယ် အဲ..တရုတ်လိုဆဲရင်တော့အရမ်းပီတယ်တဲ့ အလွန်းပြောတာပါ ဟုတ်လားဟင်? တခွန်းလောက်ဆဲပြပါလား”
“နင်metal gear solidကိုမိုးလင်းပေါက်ဆော့တယ်ဆို ps oneတုန်းကပဲငါဆော့ဖူးတာ two မဆော့ဖူးဘူး ပေးဆော့နော်”
သားကြီးပေါက်ကွဲသွားလေပြီ ငရုတ်သီးမစားရပါဘဲ ရှုးရှုးရှားရှားဖြစ်သွားလေပြီ ၊ငနဲမနှစ်ကောင်ကား တခွီးခွီးဖြင့်ရယ်မောကာ သူတို့အားပေးထားသည့်အခန်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားတော့သည်။
“ငါဘာမှပြောမထားဘူးနော် သူတို့ဘာသာသူတို့မင်းကိုဝိုင်းကြပ်နေတာ တော်တော်မလွယ်တဲ့ဟာတွေကွ”
“သြော်….မလှလိုက်သည့်ဘဝများ အိပ်မက်ထဲတွင်တောင်ဘဝက လှမနေပါချေ”
နံနက်သုံးနာရီလောက်တွင် ရေဆာသဖြင့်နိုးလာသည် ချက်ခြင်းမထဖြစ်သေး အိပ်ယာထက်တွင်ပင်လဲလျောင်းနေရင်းထူးခြားမှုတစ်ခုကိုသားကြီးသတိပြုမိလိုက်သည် သူ၏ပခုံးနားသို့ အသက်ရှုသံတစ်ခုနှင့်အတူ လေနွေးနွေးလေးတစ်ခုသည် အချက်ကျကျလာလာတိုက်ခတ်နေခြင်းဖြစ်သည်...
ပထမတွင် အလွန်းတစ်ယောက်အအိပ်ဆော့ပြီး အနားသို့ရောက်လာခြင်းလောဟုလှည့်မကြည့်ဘဲတွေးမိလိုက်သေးသည်
သို့သော် မွှေးပျံ့သည့် ကိုယ်သင်းနံ့တစ်မျိုးကိုရေးရေးလေးရလိုက်သည့်အခါ အလွန်းမဟုတ်မှန်းသေချာသွားလေပြီ ။
သားကြီးလည်းအိပ်ယာထက်ဝယ်ငုတ်တုတ်ထထိုင်ပြီး သူ့အိပ်ယာကိုသူပြန်ကြည့်လိုက်ရာ သူ့ဘက်မျက်နှာမူပြီး တစ်စောင်းကွေးကွေးကလေးအိပ်ပျော်နေသည့် အိုက်ယင်နှင့်သူ့ဘေးဘက်တွင် အလင်းအား ပြင်ပမှမီးရောင်မှုန်မှုန်ဖြင့်မြင်တွေ့လိုက်ရတော့သည်။
“စောက်ကလေးမတွေ ကိုယ့်အခန်းကိုယ်မအိပ်ကြပါလား ပြဿနာပဲ”
အလွန်းကားဘာမှမသိဘဲအိပ်ပျော်နေရှာသည် ဘယ်အချိန်ကတည်းကဝင်လာအိပ်ကြသည်မသိ အလွန်းနှင့်သားကြီး နှစ်ယောက်သားအိပ်ပျော်သွားချိန်တွင် ငနဲမတွေ ဝင်လာကြပုံရသည် ။ အခန်းကကျယ်သဖြင့်လူလေးယောက်လည်းချောင်ချောင်ချိချိအိပ်နိုင်လေသည် ။
ရေသောက်ပြီးပြန်အိပ်သော်လည်းတော်ရုံနှင့်သားကြီးအိပ်မပျော်ပါလေတော့ စိတ်ထဲတွင်တစ်မျိုးကြီးဖြစ်နေသည် ။
“နက်ဖြန်မှပဲ ဒီကိစ္စဆွေးနွေးရတော့မယ် ဘာကိစ္စ ကိုယ့်အခန်းကိုယ်မအိပ်ကြသလဲ”
နံနက်အလင်းရောက်သော် အခန်းကအခြင်းအရာကိုမြင်ပြီး အလွန်းလည်းအတော်စိတ်ညစ်သွား၏
“ငါ့စော်မှာဒီအိမ်သော့တူအကုန်ရှိတယ်ကွ တခါခါစိတ်ကူးပေါက်ရင်မနက်အစောကြီးတိုက်ပေါ်တက်လာတတ်တယ် အခန်းမှာ ဒီလိုရောအိပ်နေတာတွေ့လို့ကတော့သေပြီ ငါပြဿနာရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး”
သားကြီးပေးသည့်အကြံကိုယူပြီးအလွန်းလည်း သူဋ္ဌေးထံကွန်ပလိန်းတက်သည်။ သူဋ္ဌေးလည်း အိုက်ယင်နှင့်အလင်းအားခေါ်ဆူလေတော့သည်....
“ညကအခန်းအပြင်ဘက်ဝရန်တာမှာ တစ်ညလုံးလမ်းလျှောက်တဲ့ခြေသံကြားရတယ် တံခါးဖွင့်ကြည့်တော့လည်းလူမမြင်ရဘူး သရဲပဲဖြစ်မယ် အဲဒါနဲ့ကြောက်ပြီး မအိပ်ရဲတော့လို့သူတို့အခန်းဝင်အိပ်တာပါသူဋ္ဌေးရယ်”
“ငါပြောမယ် မမြင်ရတဲ့သရဲကနင်တို့ကိုဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး မြင်ရတဲ့လူကပဲနင်တို့ကိုလုပ်မှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်မိန်းကလေးဆိုတာသတိရဦး”
“အာ… ဒုက္ခပါပဲလား ဒါပဲပြောမယ်နော် ကိုယ့်အခန်းကိုယ်အိပ် အရောရောအနှောနှောအိပ်လို့ပြဿနာတက်ရင်ငါလည်းမရှင်းနိုင်ဘူး ကြားလား”
ဤသို့ဖြင့်ကောင်မလေးနှစ်ယောက်သည်ကိုယ့်အခန်းကိုယ်အိပ်ပါမည့်အကြောင်း သူဋ္ဌေးအားခပ်တည်တည်ဖြင့်ဂတိပေးပြီးနောက် အိမ်ပြန်ရောက်သော် ခပ်တည်တည်ဖြင့်ပင်သားကြီးတို့အခန်းထဲဝင်အိပ်ပြန်လေသည်။
အလွန်း၏တောင်းဆိုမှုဖြင့်အခန်းချင်းလဲလိုက်ကြသည် ၂ရက်သာကြာသည် ငနဲမနှစ်ကောင်လာပေါင်းအိပ်ပြန်သည် အကြောင်းပြချက်ကလည်းထူးမခြားနား....၊
“နင်တို့အခန်းပြတင်းတံခါးပေါက်က ညညဆိုအရိပ်တွေဖြတ်ပြေးနေတယ် လူရိပ်ဖြစ်လိုက် အကောင်တွေရဲ့အရိပ်ဖြစ်လိုက်နဲ့ မဲမဲကြီးတွေဟာ ငါတို့ကြောက်တယ်”
အလွန်းလည်းအကြီးအကျယ်စိတ်ဓါတ်ကျနေလေပြီ သားကြီးလည်း ဥာဏ်နီဥာဏ်နက်သုံးရတော့သည်။
ကြိုတင်စည်းဝါးရိုက်ထားသည့်အတိုင်း အိုက်ယင်တို့နှစ်ယောက်အားတိုးတိုးတိတ်တိတ်ခေါ်ယူ၍အလွန်းက အောက်ပါအတိုင်းပြောပြလေသည်...
“သားကြီးကိုနင်တို့ဘာထင်လဲ? မူးလာရင်အရမ်းသွေးဆိုးတာနော် တစ်အိမ်ထဲအတူတူနေတဲ့သူတွေချင်းမို့လို့ဆိုပြီး နင်တို့ကိုညှာလိမ့်မယ်တော့မထင်နဲ့ သူက ဇ ရှိတယ် မူးလာရင်ဘယ်ကောင်မမှမရှောင်ဘူး”
ပိုပြီးပီပြင်စေရန်ညနေဘက်တွင်သားကြီးသည် carlsbergနှစ်လုံးနှင့်Guinness stoutတစ်လုံးအားအပြင်မှဝယ်လာပြီးနောက်အခန်းထဲတွင်သောက်ရန်ပြင်လေသည် မျက်နှာကိုလည်းအတတ်နိုင်ဆုံးခက်ထန်ထားလိုက်၏။
“သနားလိုက်ပါဘိ ကလေးမတို့ရယ် ခုတော့သားကြီးကိုကြောက်သွားကြရှာပြီပေါ့ကွယ်”
ပြုံးဖြီးဖြီးသားကြီးမျက်နှာတည်သွားသည် တည်ရာမှမဲ့သွားသည် မဲ့ရာမှငိုမလိုညိုတိုတိုဖြစ်လာတော့သည်...
တဖက်ခန်းကူးသွားကြခြင်းမှာ ခွက်သွားရှာကြခြင်းသာဖြစ်သည် ဖန်ခွက်တစ်ယောက်တစ်လုံးရသော် သားကြီးနှင့်အတူတူဝင်ထိုင်ပြီး မပြောမဆိုနှင့် တစ်ခွက်တစ်ဖလားဝင်နွဲကြလေတော့သည်။
သားကြီးနည်းနည်းဝေနေချိန်တွင် ကောင်မလေးနှစ်ယောက်အမူးကြီးမူးနေကြပြီဖြစ်သည် ပုလင်းလည်းပြောင်လေပြီ အလင်းကငြိမ်သော်လည်းအိုက်ယင်ကအနည်းငယ်သွေးဆိုးသည် “အဟုမ်း” ဆိုသောအမည်နာမတစ်ခုအားထုတ်ပြီးဆဲနေသည် “အဟုမ်း”ဆိုတာယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက်နာမည်သာဖြစ်သည် သို့သော် မည်သူမှန်းတော့သားကြီးလည်းမသိချေ...။
“သူတို့နှစ်ယောက်မူးနေတာကိုပတ်ထိန်းနေရတာနဲ့ပဲ ငါလည်းသောက်ထားတာတွေဘယ်ပျောက်ကုန်မှန်းမသိတော့ဘူး စိတ်ညစ်လိုက်တာကွာ”
သားကြီးစကားကိုနားထောင်ပြီးသည့်နောက်အလွန်းလည်းဘာမှမကြံတတ်တော့ချေ ဖြစ်သမျှအကြောင်း အကောင်းပဲဟု သဘောပိုက်လိုက်ပုံရသည်...။
“ငါဆော့ချင်တဲ့ဂိမ်းခွေလည်းဆော့လို့မရတော့ဘူး controllerက အချိန်ပြည့်သူတို့လက်ထဲမှာ”
တမနက်တွင်ဖြစ်သည် .. အခန်းထဲတွင်ရှိုက်ရှိုက်ပြီးငိုနေသည့်အသံတစ်ခုကြောင့်သားကြီးအိပ်ယာမှနိုးလာခဲ့သည် ။
ငိုနေသူမှာ အလင်း ဆိုသည့်ကောင်မလေးဖြစ်သည် သားကြီးကိုကျောပေးထိုင်နေပြီး တစ်ကိုယ်လုံးသိမ့်သိမ့်ခါအောင် ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုနေသည် ။
“၁၀နာရီတောင်ထိုးပြီ ဘာလို့အလုပ်မဆင်းသေးတာလဲ ဟိုနှစ်ယောက်တော့ဆင်းသွားပြီး”
သားကြီးလည်းအိပ်ယာမှထလာပြီး ကောင်မလေးနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်လိုက်သည်..။ ဘယ်ကတည်းကငိုနေသည်မသိ မျက်နှာကနီပြီးဖောင်းအစ်နေသည် မျက်ရည်များကလည်း တဖြိုင်ဖြိုင်နှင့်စီးကျနေလိုက်သည်မှာ သနားဖွယ်အတိပင်ဖြစ်တော့သည်၊ တစ်ရှုးတစ်ဖာလည်းကုန်သွားလေပြီ ။
“ငါတို့အိမ်က ‘တန်ပို’လေ ဒီမနက်ပဲသေသွားပြီ အဟင့်ဟင့်ဟင့်”
“ငါ၉တန်းတုန်းကငါ့အဖွားဆုံးတော့ ၁ရက်တိတိငါထမင်းမစားဘဲထိုင်ငိုနေတာ ငါကိုယ်ချင်းစာပါတယ် ဒါပေမယ့် ငါတို့လူဆိုတာသေမျိုးတွေပဲလေ တနေ့နေ့မလွဲမသွေဒီလမ်းကိုသွားကြရမှာပါပဲ”
“ငါဒီကိုထွက်လာတဲ့နေ့တုန်းကသူသိပ်နေမကောင်းဘူး သူ့ကိုဂရုစိုက်ကြဖို့ အိမ်ကလူတွေကို ငါအတန်တန်မှာရဲ့သားနဲ့အခုလိုဖြစ်ရတာ ငါအိမ်ကိုဘယ်လိုပြန်ရမလဲ သူမရှိဘဲနဲ့ အီးဟီးဟီး”
Tempo ဟုအမည်တပ်ထားသည့်သူမဖုန်းထဲကpicture file folderတစ်ခုကိုသားကြီးအားဖွင့်ကြည့်ခိုင်းလေသည်
tempoသည်လူမဟုတ်ဘဲကြက်တူရွေးငှက်ကလေးဖြစ်နေသည် အဟိတ်တရိစ္ဆာန်ပင်ဖြစ်သော်ငြားလည်း သံယောဇဉ်ဆက်ထုံးကြောင့်ကောင်မလေးကြူကြူပါအောင်ငိုနေရခြင်းဖြစ်သည် ၁၂နာရီထိငိုပြီးနောက်မောသွားသဖြင့်ရေချိုးခန်းထဲရေဝင်ချိုးသည် ရေချိုးပြီးဗိုက်ဆာသည်ဆိုသဖြင့် သားကြီးအပြင်ထွက်ပြီးထမင်းထုပ်ပေးရပြန်သည် ထမင်းစားပြီးနောက် တန်ပိုအားသတိရသည်ဟုဆိုကာဒုတိယအကြိမ်ဆက်ငိုသည် ၊၂နာရီခွဲလောက်တွင်ငိုရတာမောသဖြင့် ခဏနားပြီးတီဗွီဇာတ်လမ်းတွဲထိုင်ကြည့်နေသည် နောက်..ကောင်မလေးအိပ်ပျော်သွားတော့သည် မအိပ်ခင်မှာတမ်းချွေသွားသေးသည်..
ဖုန်းကိုsilent modeလုပ်ထားရန်၊ ဖုန်းလာလျှင်တိုးတိုးတိတ်တိတ်ပြောရန်၊ ဂိမ်းဆော့လျှင်ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ဆော့ရန်၊ အပြင်ထွက်လျှင်အခန်းတံခါးကိုညင်ညင်သာသာတွန်းဖွင့်ရန်နှင့် ငါးနာရီအတိတွင်ခေါ်နှိုးရန်တို့ဖြစ်သည်။
စဉ်းစားရင်းသားကြီးရယ်ချင်နေသည်၊ ဤသို့ဖြင့် အလွန်း၊သားကြီး၊အိုက်ယင်နှင့်အလင်းဟူသောအသွင်မတူသူလူသားလေးဦးတို့သည် အဆွေခင်ပွန်းဖွဲ့၍ငြိမ်းချမ်းစွာနေလာကြရာ (၄၈)ရက်တိတိပြည့်မြောက်သောနေ့တွင် ထိုအဆောက်အဦး၌ထိန့်လန့်ဖွယ်ရာဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွါးခဲ့တော့သည်။
ထိုနေ့သည် အလွန်းကအပြင်ရောက်နေပြီး အလင်းကဇာတိအီပို့သို့ပြန်သွားသဖြင့်အိုက်ယင်နဲ့သားကြီးတို့နှစ်ယောက်သာအခန်းထဲ၌ကျန်ရစ်သည် ။ထိုနေ့သည် သူလိုကိုယ်လိုနေ့တစ်နေ့သာဖြစ်သည် မနေ့ကထက်ဘာမှပိုမထူးသည့်နေ့လည်းဖြစ်သည် ထူးခြားသည်က နံနက်၁၀နာရီတွင်အိပ်ယာထက်ဝယ်ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးအသက်ဖိုလှိုက်ဖိုလှိုက်ရှုနေသောအိုက်ယင်အား အိပ်ယာကနိုးနိုးခြင်းတွေ့ရခြင်းဖြစ်သည် ၊ရုတ်တရက်တော့သားကြီးလန့်သွားသည်။
“ဘာဖြစ်ရမှာလဲ တိုက်ပေါ်ကလူတွေအကုန်လုံးအောက်ကိုဆင်းပြေးလို့ ငါလည်းဆင်းပြေးတာပေါ့ ခုမှပြန်တက်လာကြတာ”
“မနက်ကပေါ့ ဘာပေါက်ကွဲသံကြီးလည်းမသိဘူး တိုက်အောက်ကနေထွက်လာတာ အကျယ်ကြီးပဲ ၁၀ထပ်လုံးကလူတွေအကုန်လန့်ပြီးနိုးပါတယ်ဆို မနိုးတာနင်တစ်ယောက်ပဲ သေစရာရှိနင်အရင်သေပြီ အားလုံးတစ်ဝုန်းဝုန်းနဲ့ဆင်းပြေးကြတော့ငါလည်းနင့်ကိုခေါ်တယ် မနိုးဘူး၊ နင့်နားရွက်ကိုဆွဲပြီးခေါ်နိုးတယ် လက်နဲ့ရိုက်တယ် လက်သည်းနဲ့ဆိတ်တယ် ခြေတောက်နဲ့ကန်တယ် အဲဒါလည်းမနိုးဘူး”
သားကြီးရုတ်တရက်ကြေကွဲသွားလေသည် “သွားကုန်ပါပြီရှိစုမဲ့ဘုန်းကံလေးတွေ”သို့သော် သိချင်စိတ်ကပိုများနေသဖြင့် ဆက်မေးမိသည်။
“လူတွေအကုန်လုံးအောက်ကိုရောက်ကုန်တယ်လေ တိုက်ကြီးပေါ်ကိုမော့ကြည့်မော့ကြည့်နဲ့ တစ်ယောက်တစ်ပေါက်ပြောနေကြတယ် ဂက်စ်အိုးပေါက်တာလိုလို သေနတ်ပစ်တာလိုလို နောက်အကြာကြီးနေလို့ဘာမှလည်းမဖြစ် အဖြေလည်းရှာမရတာနဲ့ပြန်တက်လာကြတာ မောလိုက်တာ…ဟူး!!! ”
“ညီရေ မင်းတို့တိုက်ဘက်က ဘာအသံကြီးလည်း ကွ သေနတ်ပစ်တာလား”
“အဲလောက်ဝေးတဲ့နေရာကတောင် အသံကြားရတယ် ငါကမနိုးဘူး အင်း..အိုက်ယင်ပြောသလိုပဲ သေစရာရှိရင်ငါပဲအရင်သေမှာ အအိပ်ပုတ်လိုက်တာလွန်ရော”
ဆူနာမီလှိုင်းလုံးကြီးကိုဖန်တီးခဲ့သည့်ငလျင်လည်းဖြစ်တော့၏ ထိုနေ့ညတွင် ဆူနာမီကြောင့်အတုံးအရုံးသေဆုံးကုန်သူများကိုတီဗွီသတင်းတွင်သွေးပျက်ဖွယ်ရာတွေ့ကြရတော့သည်။
သားကြီးရဲ့best friend “အလွန်း”
(၂၀၀၅ခုနှစ်ကအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါသည် ဤစာကိုဖတ်ရှုပြီးနောက် “သားကြီးက ပါးစပ်ထဲလက်ထည့်ရင်မကိုက်ဘူးပေါ့”ဟုစောဒကတက်ချင်တက်ကြမည်ဖြစ်သည် မှားပါလိမ့်မည် သားကြီးလည်းကိုက်တတ်သူသာဖြစ်ပါသည် သို့သော် သားကြီးသည် စားနိုင်လျှင်လျှော်နိုင်ရမည်ထုံးနှလုံးမူထားသူသာဖြစ်သည် ထိုစဉ်ကာလကသားကြီးတွင်စားစရာမရှိသလိုလျှော်စရာလည်းမရှိချေ ထို့ကြောင့်အိုးချင်းထားလည်းအိုးချင်းမထိ ကြိုးချင်းထားလည်းကြိုးချင်းမငြိခဲ့ရပါကြောင်း...။ ။ taryarL ၂.၃.၀၉)
အဲလိုရေးပါ ရေးပါ၊ ယုံတော့ မယုံ:P စတာနော် စိတ်မဆိုးရ
ဇာတ်လမ်းကို စိတ်ဝင်စားအောင် ရေးထားတာ ဖတ်ကောင်းတယ်။
အံမယ် တူ့ပုံကြီးလားရို့ မွေးစားဖေဖေ နော် ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်အောင် လုပ်တယ် လူကို ဟွန်းးးးးးးးးးး သွားမယ် ရှုတင်ရှိသေးတယ် ဒါဗြဲ တာ့တာ
ဖတ်သွားပါတယ။် ဖတ်လို့ကောုင်းတယ။် သီချင်းတွေ ဟာသတွေထက်ပိုကြိုက်တယ။် ဆက်ရေးပါ။ ညတော့အိပ်။
လက်ဖျား ခြေဖျား အားလုံးခါတယ်...
ကံကြီးလို့..... မဟုတ်ရင် မြေမြှုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်..